साताको राशिफल ! - Bulbul Samachar
bulbul मंगलबार, चैत १५ गते 37 views
(चैत्र ८ गतेदेखि १४ गतेसम्म)ज्यो.
श्रीकृष्ण भुषाल, सम्पर्क नम्बरः ९८४७१३८७०६
मेषः पारिवारिक सुख बढ्नेछ । मनोरञ्जनको अवसर प्राप्त हुनेछ । आयमा वृद्धि हुनेछ । छोटो दुरीको यात्रा गर्नुपर्नेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा मन जानेछ । फसेको धन फिर्ता आउनेछ । साताको शुरुवातमा भने स्वास्थ्य समस्या बढ्नेछ ।
वृषः मित्र भेटले मन प्रसन्न रहला । छोटो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ । मान्यजनबाट पूणर् सहयोग मिल्नेछ । मनोरञ्जनको अवसर प्राप्त हुनेछ । शुभ खबरहरु प्राप्त हुनेछन् । शुरुवाती दिनहरुमा भने विवादको सामना गर्नुपर्नेछ ।
मिथुनः रोजगारीका अवसरहरु मिल्नेछन् । अधुरा कार्यहरु पूरा हुनेछन् । शुभ खबर प्राप्त हुनुका साथै मन प्रसन्न हुनेछ । मित्रहरुसँगको भेटले मनमा उत्साह बढ्नेछ । मन प्रसन्न रहला । साताको अन्त्यतिर भने अनावस्यक यात्रा गर्नुपर्नेछ ।
कर्कटः बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ । छोटो दुरीको यात्रा गर्नुपर्नेछ । धार्मिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । शुभ खबर पाइनुका साथै मीठो भोजनको अवसर मिल्नेछ । पारिवारिक भेटघाटको अवसर मिल्नेछ । यात्रा गर्न पाइनेछ भने आम्दानी बढेर जानेछ ।
सिंहः नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । प्रेम प्रसङ्गले मन हर्षित रहला । मान्यजनहरुको सहयोगले अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन् । पुरानो धन फिर्ता आउनेछ । मीठो खान पाइनेछ । साताको शुरुवाततिर भने अनावस्यक यात्रा गर्नुपर्नेछ ।
कन्याः मित्र तथा आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ । मान्यजनहरुको सहयोगका कारण कामहरु सफल हुनेछन् । आयमा वृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनको अवसर मिल्नेछ । भेटघाटका अवसरहरु प्राप्त हुनेछन् । साताको मध्यतिर भने खर्च बढ्नेछ ।
तुलाः मीठो खान पाइनेछ । मान्यजनहरुको भेट र सहयोगले मनमा उत्साह बढ्नेछ । बोलिको प्रभावले अधुरा कामहरु पूरा हुनेछन् । गरेका कार्यमा सफलता मिल्नेछ । कुरा काट्नेले ठाउँ पाउनेछन् । साताको अन्त्यतिर भने कार्यमा विलम्ब हुनेछ ।
बृश्चिकः प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ । लेखन कार्यमा रुची बढ्नेछ पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ । यात्राको अवसर मिल्नेछ । नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ भने मित्रहरुबाट सहयोग मिल्नेछ । मीठो खान पाइनेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन पाइनेछ ।
धनुः आयमा वृद्धि हुनेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । लेखन कार्यमा रुची बढ्नेछ । कार्यमा सफलता मिल्नुका साथै बोलिको प्रभाव बढ्नेछ । शुभ खबरहरु प्राप्त हुनेछन् । कार्यमा सफलता मिल्नेछ भने साताको शुरुतिर भने अनावस्यक यात्रा गर्नुपर्नेछ ।
मकरः मन प्रसन्न रहनेछ । मित्रहरुको सहयोगले अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन् । प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ । पारिवारिक सुख बढ्नेछ । मित्र तथा मान्यजनहरुबाट सहयोग मिल्नेछ । साताको मध्यतिर भने स्वास्थ्य समस्या बढ्नेछ ।
कुम्भः मित्रहरुसँग भेटघाटको अवसर मिल्नेछ । छोटो दुरीका यात्राका अवसरहरु मिल्नेछन् । आफन्तहरुबाट सहयोग मिल्नेछ । कार्यमा सफलता मिल्नसका साथै ब्यापारमा लाभ मिल्नेछ । साताको मध्यतिर भने मान्यजनहरुबाट धोका हुनेछ ।
मिनः सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । नयाँ कार्यको थालनी हुनुका साथै सहयोगीहरु बढ्नेछन् । आफन्त भेटले मन प्रसन्न रहनेछ भने अतिथि सत्कार गर्न पाइनेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । मन प्रसन्न रहनेछ ।
८ गते मङ्गलबार, मंगलचौथी ब्रत, जल दिवस(पश्चिम तथा दक्षिण दिशाको साइत शुभ)लाभयोगः विहानको १ ० -२० देखि १२ -४ बजेसम्मअमृतयोगः दिनको १२ -४ देखि १-४८ बजेसम्मशुभयोगः दिनको ३-३२ देखि ५-१६ बजेसम्म
९ गते बुधबार(पश्चिम दिशाको साइत शुभ)लाभयोगः विहानको ५-७ देखि ६-५२ बजेसम्म साँझको ५-१७ देखि ७-१ बजेसम्मअमृतयोगः विहानको ६-५२ देखि ८-३६ बजेसम्मशुभयोगः बिहान १०-२० देखि १२-४ बजेसम्म
१० गते बिहिबार, विश्वक्षयरोग निवारण दिवस(पश्चिम तथा उत्तर दिशाको यात्रा शुभ)शुभयोगः बिहान ५-८ देखि ६-५२ बजेसम्म साँझको ५-१७ देखि ७-१ बजेसम्मलाभयोगः विहानको १२-४ देखि १-४८ बजेसम्मअमृतयोगः दिनको १-४८ देखि ३-३३ बजेसम्म
११ गते शुक्रबार, (उत्तर तथा पूर्व दिशाको यात्रा शुभ)लाभयोगः बिहानको ६-५२ देखि ८-३६ बजेसम्मअमृतयोगः बिहानको ८-३६ देखि १०-२० बजेसम्म शुभयोगः दिनको १२-४ देखि १-४९ बजेसम्म
१२ गते शनिबार, विश्व नेवाः दिवस(उत्तर दिशाको यात्रा शुभ) शुभयोगः बिहान ६-५२ देखि ८-३६ बजेसम्मलाभयोगः दिनको १-४९ देखि ३-३३ बजेसम्म अमृतयोगः ःदिनको ३-३३ देखि ५-१७ बजेसम्म
१३ गते आइतबार, (दक्षिण तथा पूर्व दिशाको साइत शुभ)लाभयोगः बिहानको ८-३६ देखि १०-२१ बजेसम्मअमृतयोगः बिहानको १०-२१ देखि १२-५ बजेसम्म शुभयोगः दिनको १-४९ देखि ३-३३ बजेसम्म
१४ गते सोमबार, पापमोचनी एकादशीब्रत(दक्षिण दिशाको साइत शुभ)अमृतयोगः बिहानको ५-८ देखि ६-५२ बजेसम्म ःदिनको ५-१८ देखि ७-२ बजेसम्म
शुभयोगः बिहानको ८-३७ देखि १०-२१ बजेसम्म लाभयोगः दिनको ३-३४ देखि ५-१८ बजेसम्म
शिक्षित युवा म्यादी प्रहरीमा !